ပြတ်ပြတ်သားသား ရလာဒ်အတွက် အချိန်ယူနေတဲ့ NUG – စွယ်စုံသုတ
ပြတ်ပြတ်သားသား ရလာဒ်အတွက် အချိန်ယူနေတဲ့ NUG
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေခဲ့တာ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်ကတည်းကလို့ ပြည်သူတွေက သိထားတယ် ။ ပြည်တွင်းစစ်ကို ကြူံတွေ့နေခဲ့ရလို့ ဒီထက် ပိုမလာဘူး လို့လည်း အချို့က ဆိုကြပါတယ် ။
တကယ်တော့ ဒါဟာ ပြည်တွင်းစစ် အစစ်အမှန် မဟုတ်သေးပါဘူး ။ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ တော်လှန်နေတာဟာ ကရင်ပြည်နယ်လွတ်လပ်ခွင့်ကို တောင်းဆိုနေတာပါ ။
ကမ္ဘာမှာ သက်တမ်းရှည်တဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ပါ ။ သို့ပေမယ့် ကရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ ပြည်မအထိ ရောက်မလာပါဘူး ။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းက သူတို့ပြည်နယ်ကို ပြည်မလက်အောက်ခံ လွတ်လပ်နယ်မြေတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးချင်တာပါ ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူတို့ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အင်အားကောင်းချိန်ဖြစ်ဖြစ် ပြည်မအထိ ကျူးကျော်ဖို့ ဆန္ဒမရှိခဲ့ကြတာပါ ။
ထို့အတူပါပဲ ကချင် ၊ ကယား ၊ ချင်း ၊ ရှမ်း ၊ ရခိုင် လက်နက်ကိုင်တွေ တော်လှန်နေကြတာဟာ သူတို့ပြည်နယ်အတွက်ပါ ။ ပြည်မအထိ ကျူးကျော်ဖို့ ဆန္ဒမရှိကြပါဘူး ။ ဒါဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက ဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေပါ ။
ဒါဟာ ပြည်တွင်းစစ် အမှန်တကယ် မဟုတ်သေးပါဘူး ။ ဒီစစ်ပွဲတွေကို ကွက်ကျားစစ် လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ကွက်ကျားစစ်လို့ ဆိုရတာက ကချင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကို မြန်မာစစ်တပ်က ကချင်ပြည်နယ်အထိ စစ်ချီ တိုက်ခိုက်ရတဲ့အတွက် ၊ စစ်ပွဲဟာ ကချင်မြေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကချင်မြေမှာ မငြိမ်းချမ်းပါဘူး ။ ကချင်ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ပါတယ် ။ ပြည်မက ပြည်သူတွေအတွက်တော့ တိုက်ရိုက် ဒုက္ခမရောက်ပါဘူး ။ ၁၉ ၈၈ ခုနှစ် မတိုင်မီအချိန်အထိ သေနတ်သံ မကြားဘူးတဲ့ ပြည်မက ခေတ်လူငယ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ သို့ပေမယ့် စစ်ပွဲတွေအတွက် ကုန်ကျစားရိတ် ရှိတဲ့အတွက် တိုင်းပြည် ဆင်းရဲပါတယ် ။
ဒါကတော့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်ကတည်းက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ဂရုမစိုက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ အားနည်းချက်တွေပါ ။
ကွက်ကျားစစ်ဆိုတာ မကြာ မကြာ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ စစ်ပွဲပါ ။ တစ်ခါတစ်လေ တိုက်လိုက် ၊ ပြန်ငြိမ်သွားလိုက်နဲ့ နှစ်တွေရှည်လာတာပါ ။ အဆုံးသတ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ် ။ အတွင်းမှာ လှိုက်ပြီး လောင်နေတဲ့ သဘောပါ ။ ရန်ဆောင်ပြီး အခြေအနေကြည့်နေကြတာပါ ။ အင်အားကောင်းတဲ့အခါ ပြန်ချကြပြန်ပါတယ် ။
ဒါတွေကတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေး မတိုင်ခင်အချိန်အထိ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ကွက်ကျားစစ် အခြေအနေပါ ။ အာဏာသိမ်းပြီး အခုအချိန်မှာတော့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုယ်တိုင်က မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းစစ်ဆီကို ဦးတည်နေတယ်လို့ ထုတ်ပြောလာပါပြီ ။ ဒီတော့ …၊
” မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေဟာ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်နေပြီလား …? ”
ဆိုရင် ၊ မဖြစ်သေးပါဘူး ။ ပြည်တွင်းစစ်ဆီကို ဦးတည်နေတာပါ ။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့စံနှုံး သတ်မှတ်ချက်ကို စာရေးသူက ပြောပြခြင်းပါ ။ ပြည်သူ့သူရဲကောင်းတွေ အသက်ပေးနေရပေမယ့် ၊ ဘာ့ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် အမှန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ ပြောတာကို နားလည်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ် ။
ကောင်းပြီ …၊ ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအခြေအနေလဲ …?
ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ် ။
ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်ခုမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ ။ လူမျိူးရေးအဖွဲ့တွေ ညှိနှိုင်းလို့မရတော့ပဲ လက်နက်ကိုင်တဲ့အထိ ပြင်းထန်လာတာကို ပြည်တွင်းစစ်လို့ခေါ်ပါတယ် ။
နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ နှစ်ဘက်အုပ်စုတွေဟာ နယ်မြေ ၊ ဒေသ ၊ ကျေးရွာ ၊ နယ်မြို့ ၊ မြို့ကြီး ဆိုတာတွေ မခွဲခြားတော့ပဲ နေရာတစ်ခုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ကြတော့တာပါ ။ ဆိုရရင် …၊ မြန်မာပြည်သူတွေ တွေ့ကြူံနေရတဲ့ စစ်ပွဲဟာ ကွက်ကျားစစ်ဖြစ်ပြီး နေရာ ၊ ဒေသမရွေး စစ်မီးတောက်လောင်လာတာကိုတော့ ပြည်တွင်းစစ်လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
ပြည်တွင်းစစ်မှာ ” သမားရိုးကျ စစ်ပွဲ ” နဲ့ ” သမားရိုးကျမဟုတ်သော စစ်ပွဲ ” ဆိုပြီး နှစ်မျိူးရှိပါတယ် ။
သမားရိုးကျစစ်ပွဲဆိုတာက အင်အား ၊ လက်နက် မတိမ်းမယိမ်းရှိနေတဲ့ နှစ်ဘက်အဖွဲ့တွေဟာ သာမန် သေနတ် ၊ ဗုံး ၊ အမြှောက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ စစ်ပွဲပါ ။
သမားရိုးကျမဟုတ်သော စစ်ပွဲကတော့ အင်အားကောင်း ၊ လကနက်ကောင်းတဲ့ အဖွဲ့တွေဟာ ခေတ်မီနည်းပညာ ၊ ခေတ်မီအဖျက်စွမ်းအားကြီးတဲ့ လက်နက်တွေသုံးတဲ့တိုက်ပွဲပါ ။
ကောင်းပြီ …၊ ဒါတွေကို ဘာ့ကြောင့် ရှင်းပြနေရသလဲဆိုရင် …၊ ” NUG ကို အားမရဘူး ” ” D-Day ခေါ်ပါတော့ ” ” ဘာလုပ်နေတာလဲ ၊ ပြည်သူတွေက အသက်အပိုမပါဘူး ” ဆိုသလို ပြည်သူအချို့ရဲ့ ခံပြင်းမှု့ ၊ အားမရမှု့တွေကြောင့်ပါ ။
စာရေးသူတို့ သိထားရမှာက ဒီနေ့ခေတ်ဟာ နည်းပညာခေတ်ပါ ။ နည်းပညာခေတ်မှာ နည်းပညာကို ကောင်းကောင်း အသုံးချတတတ်ရင် တိုက်ပွဲဟာ အချိန်မကြာဘူးဆိုတာ ခေတ်ပညာတတ် လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ NUG ဟာ ကောင်းကောင်းသိပုံရပါတယ် ။
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ သမားရိုးကျ တိုက်ပွဲမျိူးတွေနဲ့ ကွက်ကျားစစ်အဖြစ်နဲ့ အချိန်ကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိလို့ NUG က အချိန်ယူနေတယ်လို့ စာရေးသူက သုံးသပ်ပါတယ် ။ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကို အင်အားသုံး ၊ ဘက်နက်တပ် ၊ ကျားထိုး ၊ လက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့ တောင်ကုန်းသိမ်း ၊ အလံထောင် ၊ ဓာတ်ပုံရိုက် ၊ အောင်ပွဲသတင်းကြေငြာ ဆိုသလိုမျိူးနဲ့ တောင်ကုန်းတစ်ခု သိမ်းလိုက်နိုင်တာကို စစ်ပွဲတစ်ခု ပြီးဆုံးသွားသလို ဂုဏ်ယူပြခဲ့တာတွေပါ ။
ဒီတိုက်ပွဲမှာ ထူးချွန်သူတွေကိုလည်း ဆုတံဆိပ်တွေနဲ့ ဂုဏ်ပြုပါသေးတယ် ။ ၃_၄ ရက်အကြာမှာ စခန်းပြန်အသိမ်းခံရတာကိုတော့ သတင်းအသိမပေးပါဘူး။
တိုက်ပွဲနဲ့ စစ်ပွဲဆိုတာ မတူပါဘူး ။ ထို့အတူပါပဲ ၊ တိုက်ပွဲနိုင်တာနဲ့ စစ်ပွဲနိုင်တာ မတူပါဘူး ။ တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာ အနိုင်ရနိုင်သလို ၊ အင်အားမမျှလို့ တပ်ဆုတ်ရတာတွေလည်း ရှိပါတယ် ။
စစ်ပွဲဆိုတာကတော့ တိုက်ပွဲတွေ အားလုံးပေါင်းပြီး ရလာဒ်တစ်ခုကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရလိုက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိူးကို စစ်ပွဲလို့ခေါ်ပါတယ် ။
ဆိုရရင် …၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ တော်လှန်နေတဲ့ ရဲရဲတောက် ပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ ကွက်ကျားစစ်အဖြစ်နဲ့သာ ရှိနေပါသေးတယ် ။
ဒါဟာ ခေါင်းငုံမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှု့နဲ့ PDF ရဲ့ D-Day အထိ အချိန်စောင့်ရင်း တော်လှန်နေတာပါ ။ ပြည်တွင်းစစ် တကယ်ဖြစ်ချိန်မှာတော့ PDF နဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေဟာ နယ်မြေမရွေး လှုပ်ရှားလာနိုင်ပါတယ် ။
အချိန်အကြာမခံနိုင်တဲ့ NUG ဟာ အင်အား ၊ လက်နက် ၊ နည်းပညာတွေကို ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ အကူအညီနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ အောင်နိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ အခြေအနေအားလုံးအပေါ်မှာ လေ့လာပြီးမှ သုံးသပ်ထားပါတယ် ။
( ဝိကီပီးဒီယားမှ ” ကမ္ဘာ့စစ်ရေး အမျိူးအစားနှင့် စစ်မဟာဗျူဟာ ” ကို ကိုးကားထားပါတယ် )
ရွှေကူမြို့အနီး စစ်သင်္ဘောများကို KIA ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ဖျက်သိမ်းကြောင်း စစ်ကောင်စီကြေညာ
“ဝတဲ့သူတွေ နှင့် ဟောက်တတ်တဲ့သူတွေမှာ...
“ကမ္ဘာမှာ နေမဝင်တဲ့ နိုင်ငံ (၆) နိုင်ငံ...
“တစ်ရက် နှစ်ရက် သုံးရက်…အပျင်းဖျားပြီး...
“မိုးကြိုး ပစ်ပုံ ပစ်နည်း (၄) မျိုးနှင့်...